İmamoğlu wuxuu siiyaa Injiilka Gaadiidka Badda dadka Kartal | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu wuxuu warka wanaagsan ee Gaadiidka Badda u diray Dadka Kartal
İmamoğlu wuxuu warka wanaagsan ee Gaadiidka Badda u diray Dadka Kartal
04 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
gorgorka imamoglu wuxuu umada u diray war wanaagsan oo ku saabsan gaadiidka badda
Ekrem Imamoglu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, wuxuu sameeyay '12 of Kartal' inta lagu guda jiray booqashadiisa degmooyinka degmada. Imamoglu, ka dib booqashadii su'aasha suxufiyiinta ee ku saabsan dhibaatada gaadiidka ee Istanbul, “Dhibaatada taraafikada ee Istanbul waxay leedahay arrimo badan, daneeyaha ayaa aad u badan. Arrintaani waa inay ka shaqeysaa wadashaqeynta muwaadiniinta. Dabcan, waxaan dooneynaa inaan ku soo daro safarka dayaca ee badda sida ugu waxtarka badan. Istanbul waxay qayb aad u yar ka leedahay gadiidka badda. Waan kordhinaynaa. Arintan, 11 sidoo kale waxay leedahay 'Seminaajiyada Badda' bishii Diseembar. Markaa waxaan yeelan doonnaa 'Aqoon-isweydaarsi Gaadiidka'. Waxay noqon doontaa kulan ballaadhan oo aad u balaadhan. Laakiin waxaa jira hal xaqiiqo: qaybta ugu muhiimsan tani waa metro. Maalgashigayada lama huraanka ah wuxuu noqon doonaa metrooga ”.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul (IMM), wuxuu booqday degmada 12 ee degmada Kartal. Imamoglu, Booqashada Dawladda Hoose ee Kartal, Duqa Magaalada Gokhan Yuksel, ayaa waxaa soo dhoweeyay shaqaalaha iyo shacabka. Muwaadiniinta, ubaxyada iyo Istanbul ayaa hadiyado ka soo qaatay miiska Imamoglu, ka dibna wuxuu aaday xafiiska Yüksel. Yüksel wuxuu uga mahadceliyay İmamoğlu booqashadiisa.
“GAADIIDKA BADA WAA KU SAABSAN YAHAY”
Arrintii ugu horreysay intii lagu jiray booqashada, oo ku dhacey bilowga saacadda shaqada, waxay ahayd gaadiid. Imamoglu wuxuu cadeeyay inay gaadheen 1 saac 15 daqiiqad baddii markay ahayd Kartal ilaa Kartal wuxuuna yidhi, bir wakhti fiican 1 saac waa daqiiqad 15. Haddii aan kobcinno oo aan kordhinno qodobbada xaddidan, doonyo badan ayaa gaar ahaan lagu isticmaali karaa Istanbul. 11 Waxaan leenahay 'Aqoon-isweydaarsi Badda' bishii Diseembar. Markaa waxaan yeelan doonnaa 'Aqoon-isweydaarsi Gaadiidka'. Waxaan rabnaa inaan badda u soo saarno. Xeebta Beylikdüzü, xeebta Kartal, Tuzla Shipyard waxay ISTAC ka sameysay doon 1 saac 15 daqiiqad ah waan awoodnay inaan imaan karno. Sidaa darteed, marin u helista badda ee magaalada Istanbul waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah howsha soo socota; laakiin gaar loo leeyahay, laakiin gaadiidka dadweynaha. Dabcan, aag u baahan kabitaan; waan ognahay. Natiijo ahaan, kaabis ayaa sidoo kale jira gaadiidka oo dhan. Haddii aan ilaalin karno qayb ka mid ah badda, tani sidoo kale waa mid muhiim u ah nabadda Istanbul. Sababtoo ah gaadiidka badda waa mid aad u fiican, deegaan nabdoon. Waxaan dooneynaa inaan horumar sameyno. ”
WAA INAAN BOOQONAYAA DEGMADA 39 ”
Fikradaha Imamoglu ee ku saabsan booqashadiisa Kartal waxay ahaayeen sidan soo socota: “Maanta waxaan joognaa Kartal. Degmadeena 12 waxay ku jirtaa booqashooyinkayaga. Waxaan rajeynayaa inaan sida ugu dhakhsaha badan u dhammeyno; laakiin ajendahayagu waxay sababayaan booqashooyinkaan inyar xoogaa. Waxaan dejineynaa dhamaadka sanadka, laakiin waxaan helnaa waqti adag. Waxaan booqannaa dhammaan degmooyinka degmada. Waxaan booqaneynaa 39. Waxaan ku sameyneynaa go'aanno deg-deg ah degmo ahaan. Sharaftayada Duqa Kartal ee 'Kartal' indhihiisa, sidee ayaynu ugu horumarin karnaa ganacsi wada jir ah oo ay la yeelato IMM, maalgashiga ay IMM halkan ku hayaan, maxay noqon karaan mudnaantooda mudnaanta leh Waxaan ku booqannaa degmooyinka isla ajendahaas. Waxaan ku sameyn doonaa qiimeyn ajendahaan. Waxaan rajeynayaa maalin shaqo oo wax soo saar leh inay Kartal u abuurto hanaan aad u wanaagsan oo ay la yeelato IMM.
Khudbadda kadib, waftiga IMM iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose ee Kartal ayaa maray miis wada-jir ah.
“MUWAADINIINU WAA INUU KU YIHIIN ganacsi”
Kulankaas kadib, dhibaatooyinka degmada Kartal waxaa laga wada hadlay, İmamoğlu oo ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta. Imamoglu, su’aasha ah waxa looga wada hadlay kulanka ku saabsan safarka Istanbul, “Dhibaatada taraafikada ee Istanbul waxay leedahay arrimo badan, daneeyaha ayaa aad u badan; metro, metrobus, lugeeyaha, baaskiil wadista, gaadiidka bada, baska, tagaasida, arimo badan ayaa jira ... Arrintaan waa in si guud looga hadlaa, runtii waa fikir isku dhafan iyo isku dhafan waa in loo adeego dadka reer Istanbul. Arrintaani waa inay ka shaqeysaa wadashaqeynta muwaadiniinta. Labadaba IMM waxay yeelan doonaan machadyo laxiriira muwaadinkuna wuxuu kujiraa iskaashikan. Marka hore, muwaadinku si fiican ayuu u fahmi doonaa howlaha. Dabcan, waxaan dooneynaa inaan ku soo daro safarka dayaca ee badda sida ugu waxtarka badan. Istanbul waxay qayb aad u yar ka leedahay gadiidka badda. Waan kordhinaynaa. Arintan, 11 sidoo kale waxay leedahay 'Seminaajiyada Badda' bishii Diseembar. Halkan waxaan ka wada hadli doonaa, iyada oo ay la socdaan dhammaan daneeyayaasha badda, 'Sida loo horumariyo'. Markaa waxaan yeelan doonnaa 'Aqoon-isweydaarsi Gaadiidka'. Waxay noqon doontaa kulan ballaadhan oo aad u balaadhan. Xaqiiqdii, waxaan ku socon doonnaa wadada annaga oo bartilmaamed ka dhiganeynna horteenna annaga oo sameynayna qorshihii Masterka ee safrinta Istanbul. Laakiin waxaa jira hal xaqiiqo: qaybta ugu muhiimsan tani waa metro. Maalgashigayada lama huraanka ah wuxuu noqon doonaa metrooga ”.
Am Kadib Kaynarca, waxaa jiray khad gaadiid oo ay kujirto Sabiha Gökçen. Muxuu yahay qorshaha isaga? Goorma ayuu dhismuhu bilaabmayaa? Waqtigaan la joogo waxaa jira xariiqyo metrooga oo joogsan; imisa xariiq ayaa hadhay oo xaaladdee ayaa ku jirta? Daraasaddu ma waxaa la bilaabay mise waxay u taagan tahay calaamo ahaan? İmamoğlu ayaa uga jawaabay su'aashan soo socota:
"QURAANKAADA IYO KU SAABSANAANKA FARSAMADA"
“Waxaan horey u sheegnay in khadka 8 uu istaagay. Khadadka taagan, waxay ahaayeen kuwa iska cad; laakiin khadka qandaraaska ma leh faahfaahinta mashruuca. Dhibaatooyin sidan oo kale ah ayaa jira. tus Khadkii Mahmutbey-Esenyurt waa mid si aad ah u dhib badan oo tafaasiisha qadkayaga. Saaxiibbaday ma ahan oo keliya fiirsashada khadka hindisada, laakiin geedi socodka oo dhan. Shaqo dhaqso badan ayaa la qabtay qaarna ma aysan helin fursad ay ku socdaan. Tuzla-Pendik-Kaynarca, sumcadda lagu sharaxay qaybta khadadka shaqadooda ayaa sii socota. Dib-u-eegisyo yar ayaa dhacaya, laakiin howshu halkaas ayey ka bilaabatay. Dhawaan, waxaan la joogi doonnaa howsha sida aasaasida, aasaaska, sida loo hadlo. Dadaalkayaga dhaqaale iyo farsamada ee la xiriira khadadkayada kale ayaa sii socda. Dhibaato kale ayaa na haysata. Annagu kuma koobnayn khadka 8. Waxaan leenahay baahi kale oo khadka toosan mustaqbalka ah ee Istanbul. Tusaale ahaan, Beylikdüzü dhinaca waa aag aad loo dayacay. Waa arin tareen oo aad u muhiim ah oo aan danaynayno. Sababtoo ah 2-2,5 milyan oo qof oo ku nool gobolkaas ma laha xiriir metro. Xitaa xiriirkeeda kaliya ee lala leeyahay Istanbul waa metrobus. Horeba mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee bararka metroobus waa in gobolka ka fog yahay nidaamyada tareenka. Iyada oo lagu darayo dhammaan arrimahan, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in xariiqan '8 Line' ay ku bilaabato qaar ka mid ah dib-u-eegisyada mashruuca sida ugu hufan, iyo in lagu cabbiro mashaariic cusub oo u baahan in lagu bilaabo si dhakhso ah, baahi aad u deg-deg ah marxaladda soo socota, iyadoo la cabbirayo waxtarka mashruuca halkan iyo iyadoo la bixinayo maalgelinta mashruuca. , ku talojirto inaad bilowdo howlaha. Marka si gaaban: Sannadka soo socda ee 4 waxaan dooneynaa inaan ku dhameysanno kuwan, sidoo kale aan bilowno masaafo halista ah halkaas oo aan si hufan u shaqeyno, aad u tayo badan. Intaa waxaa sii dheer, aqoon isweydaarsigayaga ayaa na siin doona natiijadan halkan. Hadafkayagu waa inaan la wadaagno saadaasha mustaqbalka ee 2020 dadka reer Istanbul ugu dambeyn Janaayo. ”
"WAA WAAN CADAALADNAYNAA DHAQAN IYO Dagaal FADLAN"
İmamoğlu wuxuu yidhi, Esenyurt Joogtada metro ee Esenyurt-Mahmutbey wuxuu leeyahay qiime daman oo qiyaastii ah bilyan 3. Haddii aysan jirin faahfaahin faahfaahsan oo mashruuc ah, sidee ayay lacagtan ku dhacday? Mashququ su'aashu waa, "Dabcan waxaa jira faahfaahin mashruuc ah. Waa naqshad kiiloomitir ah. Jooji qiime. Dhammaantood waa la falanqeeyay. Markaa qiimaha ayaa sidoo kale la falanqeeyay. Dabcan, qaabka hindisada sidoo kale waa la lafaguray, laakiin 'Waxaan bilownay maanta. Waxaan haynaa mashruuc dhameystiran. Dhamaadka xariiqda waa hubaal, saldhigyada sidoo kale waa hubaal 'maahan kiis xariiq. Aynu nidhaahno si cad. Haddii aysan ahayn mid deg deg ah, maanaan la kulmi lahayn khadka '8'. Si dhakhso leh, si fiican looma qaabaynin, falanqaynta sahaminta looma sameynin, iyo hannaanka jilicsan looma shaqeynin si ku habboon; sidaa darteed, ma jiraan wax maalgelin ah oo xaaladda hadda jirtaana waa la soo maray. Laakiin waxaan leenahay saaxiibo aad karti u leh. Waxaan sameyneynaa halgan dhameystiran oo deg deg ah iyadoo aan baabi'ineyno shirkadaha la siiyay qandaraaska, oo aan ku darin hannaanka, aan ku soo celinayno qibradooda ganacsiga iyo baabi'inta cilladaha ay halkaas ku arkeen ".
Imamoglu, saxafiyiin kadib markii ay ka jawaabayaan su'aalaha Y withksel, Kartal, sahaminta goobta. Imamoglu, oo markii ugu horreysay baaritaan ka sameeyay Fagaaraha Kartal, "Meeshani waa ooyaysaa" go'aan, wuxuu siiyay tilmaamo lagu dardar gelinayo shaqada gobolka.
Madaxwaynaha Altepeden Eregli seaplane ayaa waydiistay baska Bandirma
Taageerada isdhexgalka badda ee qadka tareenka ee Kadikoy-Kartal
Metro Ready, Kartal-Kadikoy 29 Saacadaha, Kartal-Üsküdar 35 Daqiiqadaha
Kartal-Taksim wuxuu noqon doonaa 55 Minute oo leh furitaanka Kadikoy-Kartal Metro
Mashruuca tareenka ee Kadikoy-Kartal ee sii socdo, ma jiraa khadka Kartal-Gebze?
Gawaarida Gawaarida iyo Kaararka Keynarca ayaa duulimaadyo ku duulaya gobolka Kartal
Duqa Magaalada İmamoğlu: 'Haydarpaşa iyo Saldhigyada Tareenka ee Sirkeci ee Dadka Magaalada Istanbul'
Ku-xigeenka Kinay Kutahyaya waxay qabatay Tareenka Xawaaraha Sare
Wasaaradda Ganacsiga iyo Isgaadhsiinta
Gudoomiye kuxigeenka Gumaysiga Torbalı wuxuu siiyay warka wanaagsan ee Izban iyo Metropolis
Gaadiidka Badda Istanbul
Khadadka metrooga ayaa joogsaday Istanbul
Dhibaatada gaadiidka ee Istanbul
Mashruuca metro Beylikdüzü
Gaadiidka Badda Kartal
Mahmutbey Esenyurt line line
Muddada Visa ee Kaarka Denizli ee Waayeelka iyo Naafada ah